China Industrial Kudzora Bhodhi Yakazara Turnkey Assembly Kugadzira uye Fekitori | KAISHENG pcb
Vehicle Kudzora Circuit Bhodhi Gungano
Turnkey Yakachipa pcb Assembly
Hwendefa PC Turnkey pcb Magetsi Assembly
Industrial Kudzora Bhodhi Yakazara Turnkey Assembly
FPGA Yakakwira-Yekumhanya Circuit Bhodhi Gungano
Mutungamiriri Bhodhi Rakadhindwa Circuit Assembly
Dunhu Kadhi Assy
Yakaderera Mutengo pcb Kudhinda Uye Gadzira Vagadziri ...
China Cheap pcb Kugadzira Nezvikamu Compan ...
China yakachipa pombi smd pcb mugadziri Quote ...
PCBFuture inopa yakanakisa muPCB nhema uye neMasevhisi masevhisi. Isu tine yakakwana ESD dziviriro uye ESD yekuyedza masevhisi akabatsirwa nevanozvipira vashandi vevashandi. Kwemakore gumi apfuura, PCBFuture yakaramba ichikura uye ichikura nekuti tagara takazvipira kupa yakanakisa sevhisi sevhisi uye mhando yechigadzirwa.
Metal bemhapemha: HASL Tungamira MAHARA
Maitiro Ekugadzira: SMT +
Akaturikidzana 2 Rukoko pcb
Base Material: FR-4 tg135
Midziyo Yesimbi: HASL Tungamira YEMAHARA Mamiriro Ekugadzira: SMT + Germinales: 2 rukoko pcb
Chinyorwa Chekutanga: FR-4 tg135 Certification: SGS, ISO, RoHS MOQ: Kwete MOQ
Solder Mhando: Lead-Yemahara (RoHS Inoenderana) One-Stop Services: Yakaderera vhoriyamu pcb gungano Kuedzwa: 100% AOI / E-bvunzo / Kuedzwa Kwesimba
Tehnology Tsigiro: Yemahara DFM (Dhizaini YeKugadzira) Tarisa Mhando dzeAssemblies: SMT, THD, DIP, Mixed Technology PCBA Yakajairwa: IPC-a-610d
Pcb uye PCBA Quick Turn Pcb Akucheka
Keywords: Pcb Assembly Sevhisi, Pcb Gungano Maitiro, Pcbhu Yevanhu, Pcb Assembly Vagadziri, Tendeuka-Kiyi
Sei sarudza yedu pcb gungano masevhisi?
1. Mune yakasarudzika Tendeuka-Kiyi, iwe unogona kuraira maPCB uye zvikamu zvisina kukwana. MaInjiniya edu ane makumi emakore ePCB yekunyepedzera ruzivo kuve nechokwadi chekuti kuiswa kwezvikamu kunosangana nedunhu uye zvemagetsi zvivakwa zvinodiwa.
2.PcBFuture inogona kupa yakakwira mhando isina maPCB uye akadhindwa wedunhu bhodhi magungano pamakwikwi zvakanyanya mitengo ine yakanakisa sevhisi uye inouya nenguva.
3.Nezvedu zviwanikwa uye neruzivo, isu tine izvo zvinotora kuzadzikisa yako projekiti inoda kubva pane pfungwa kusvika mukugadzira uye zvakare uve wako akazara emagetsi enjiniya shamwari chero hombe kana diki chirongwa chako chiri.
Tinogona kupa pazasi masevhisi:
Kuedza uye kuronga
Kumumvuri pcb gungano
Dzoka-Kiyi Dunhu Bhodhi Gungano Services
Kuongorora kwemhando yepamusoro uye musangano wekupedzisira
Maitiro ekuita chokwadi chemagetsi zvigadzirwa zviri zvepakutanga
1. Haufanire kutenga zvigadzirwa zvechipiri nemaoko emanyepo zvakachipa. Iwe unofanirwa kutenga kubva kune yekutanga fekitori yakasarudzika vamiririri uye dzimwe nzira dzepamutemo, senge Dejie, Mouser, Arrow, nezvimwe;
2. Zvinhu zvakatengwa zvinofanirwa kufananidzwa neBOM yekugadzira kuona kuti iyo mhando uye modhi iri chokwadi;
3. Kunze kwekunge mutengi ataura zvinodiwa, izvo zvigadzirwa zvakatengwa zvinonyatso kugadzirwa nevagadziri vepamutemo, uye hunhu hunovimbiswa;
4. Zvinhu zvakatengwa zvinofanirwa kuongororwa kuti zvisimbise mashandiro acho nemazvo;
5. Zvinhu zvakatengwa zvinofanirwa kuchengetwa zvine mutsindo kudzivirira matambudziko emhando dzakadai seunyoro nekuda kwekuchengetwa zvisirizvo kwezvinhu.
How kusarudza pcb gungano mugadziri?
1. Iyo dhigirii yehunyanzvi fekitori.
2. Kuziva nezvebasa.
3. Chiitiko cheindasitiri.
4. Mutengo wePCBA kugadzirisa uri pachena.
Isu tinobatsira, kutarisisa uye kutsigira neanoshanda maitiro ekukubatsira iwe kuhwina mumakwikwi emisika. Kana zviri zvemitengo yedu, iwe uchavawana iwo anodhura kwazvo. Kana iwe uine chero mibvunzo kana kubvunza, ndapota inzwa wakasununguka kubatasales@pcbfuture.com , isu tichakupindura iwe ASAP.
Pashure: FPGA Yakakwira-Yekumhanya Circuit Bhodhi Gungano
Zvadaro: Chishandiso Circuit Board Gungano
Turnkey pcb gungano
Chishandiso Circuit Board Gungano
Main Bhodhi Pcb Assembly China
Main Pcb Gungano